सुशान्त सिंह राजपूत मामिलामा सीबीआईलाई किन चाहियो अमेरिकाको मद्दत ? - Nagarik Today
होम » सुशान्त सिंह राजपूत मामिलामा सीबीआईलाई किन चाहियो अमेरिकाको मद्दत ?
अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्युको मामिलामा सीबीआईले अनुसन्धानका लागि अमेरिकाको मद्दत माग गरेको छ ।​ सीबीआईले सुशान्त सिंह राजपूतको सोसल मिडिया अकाउन्ट्स र इमेलका डिलिट गरिएको डाटा फिर्ता पाउनका लागि अमेरिकी कम्पनी गुगल र फेसबुकलाई मद्दत गर्न आग्रह गरेको छ ताकि अतितमा मृत्युसँग सम्बन्धित यदि कुनै सुराग भेटिए त्यसबारे थाहा पाउन सकियोस् ।
अंग्रेजी पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले यसबारे सूचना भएका मानिसहरुबाट पाएको जानकारीको आधारमा यो खबर दिएको हो । सुशान्त सिंह राजपूतको शव १४ जून सन् २०२० मा मुम्बईको बान्द्रास्थित उनको घरमा भेटेको थियो । सुशान्त सिंहको मृत्युको मामिलामा उनकी प्रेमिका तथा अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीसहित उनको परिवारमाथि आरोप लगाइएको थियो । यद्यपि, रिया चक्रवर्तीले यी सबै आरोपलाई गलत बताएकी छिन् ।
पत्रिकाका अनुसार सीबीआईले पारस्परिक विधिक सहायता सन्धी (एमएलएटी) अन्तर्गत गुगल र फेसबुकसँग सुशान्त सिंहको डिलिट भइसकेको च्याट, इमेल वा पोस्टको जानकारी मागेको छ ताकि यसको अनुसन्धान गर्न सकियोस् । भारत र अमेरिकाबीच पारस्परिक विविध सहायता सन्धी भएका कारण दुबै देश घरेलु मामिलाको अनुसन्धानमा एक–अर्कासँग सूचना माग्न सक्छन् । भारतको गृह मन्त्रालय एमएलएटीअन्तर्गत सूचना प्राप्त गर्न सक्छ वा साझा गर्न सक्छ जबकी अमेरिकामा अटोर्नी जनरलसँग यसको अधिकार छ ।
पहिचान साझा नगर्ने शर्तमा एक अधिकारीले भने, ‘हामी मुद्दा पूरा गर्नु अघि कुनै पनि कसर बाँही छोड्न चाहन्नौँ । यस्ता डिलिट गरिएका च्याट वा पोस्ट छन् कि भनेर हामी थाहा पाउन चाहन्छौं । यसले यो मुद्दामा हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ । ’यद्यपि, एमएलएटीअन्तर्गत जानकारी पाउन समय लाग्न सक्छ किनभने यो थोरै लामो प्रक्रिया हो ।
सुशान्त सिंहको परिवारका वकिल विकास सिंहले सीबीआईको यो कदममा प्रशंसा गरेका छन् । उनले भने, ‘मलाई यो कुराले खासै चकित बनाएको छैन किनभने सीबीआई यो मामिलामा व्यापक अनुसन्धान गर्न चाहन्छ । सुशान्त सिंहको मृत्युको पछाडि असाध्यै धेरै रहस्य छन् किनभने जे भयो, त्यसबारे जानकारी लिनका लागि कुनै प्रत्यक्षदर्शी वा क्यामरा छैन । मलाई लाग्छ कि सीबीआई एक सही लीड खोज्ने कोसिस गरिरहेको छ । ’
सुशान्त सिंहको मृत्युपछि उनका पिता केके सिंहले सुशान्तकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती र उनको परिवारविरुद्ध पटनामा ऊजुरी दर्ता गराएका थिए । उनीमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोप लगाइएको थियो । सुरुमा यसबारे मुम्बई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर अगस्ट २०२० मा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा अनुसन्धान सीबीआईलाई सुम्पिइएको थियो । प्रवर्तन निर्देशनालय र नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरोले पनि यो मामिलाबारे भिन्न–भिन्न पक्षको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।